पाकिस्तानः बाँच्न सफल एक व्यक्तिले बताए विमान दुर्घटनापछिको नालीबेली - बडिमालिका खबर
बीबीसी– पाकिस्तानमा शुक्रबार कराँची एयरपोर्ट नजिकै एक विमान दुर्घटनामा बाँच्न सफल व्यक्तिले आफ्नो अनुभव साझा गरे । मुहम्मद जुबैर ती व्यक्तिमध्येका एक हुन् जो विमान दुर्घटनामा बाँच्न सफल भएका छन् । पाकिस्तानी स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार पाकिस्तानी एयरलाइन्सको विमान एयरबस ए३२० आवासीय इलाकामा दुर्घटनाग्रस्त भएपछि ९७ व्यक्ति मारिएको पुष्टि भएको छ ।
विमान दुर्घटना हुनुको कारण अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । तर स्थानीय मिडिया अनुसार विमान चालकले एकपटक अवतरणमा असफल भएपछि विमानमा प्राविधिक गडबडी आएको सुचना दिएका थिए । त्यसपछि विमान दुर्घटना हुनु ठिक अघि विपत्तिको संकेत शब्दमा ‘मे डे – मे डे’ भनेका थिए ।
फ्लाइट पीके८३०३ ईदको ठ्याक्कै अघि लाहोरबाट उडेर ९१ यात्रीसहित लाहोर फर्किरहेको थियो । उक्त विमानमा थुप्रै परिवारका सदस्य सवार थिए । यो विमानले दिउँसो साढे दुई बजे कराँचीको जिन्ना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने कोसिस गरिरहेका बेला यो दुर्घटनाग्रस्त भयो । मामुली चोटसहित बाँच्न सफल जुबैका अनुसार विमानले एकपटक अवतरण गर्ने कोसिस गरेको र त्यसको १०–१५ मिनेटपछि यो दुर्घटनाग्रस्त भएको हो ।
दुर्घटनापछि जुबैर बेहोस भएका थिए । जुबैर भन्छन्, ‘जब मलाई होस आयो तब मैले चारैतिर चिच्याहट सुनिरहेको थिएँ । बच्चाहरु र वयस्क चिच्याइरहेका थिए । मैले आगोमात्र देखिरहेको थिएँ । त्यहाँ कोही व्यक्ति देखिनँ । ’
लाहोरबाट उडेर कराँची पुग्नै लाग्दा विमानस्थलमा अवतरण गर्नु ठिक अघि यो विमान आवासीय इलाका जिन्ना गार्डन मोडल कोलोनीमा खसेको थियो जुन एयर पोर्टभन्दा ३.२ किलोमिटर मात्रै टाढा छ ।
दुर्घटना हुनु ठिक अघि विमानका चालकले इन्जिन खराब भएको र विपत्तिको संकेतमा ‘मे डे’ शब्द उच्चारण गरेका थिए । पीआईएका मुख्य कार्यकारी अधिकारी एयर भाइस मार्शल अरशद मलिकले दुर्घटनालगत्तै पाइलटले ट्राफिक कन्ट्रोललाई विमानमा प्राविधिक समस्या आएको सूचना दिएको जानकारी दिए । पाकिस्तानको समाचार च्यानल दुनियाँ न्यूजले पाइलट र ट्राफिक कन्ट्रोलबीच भएको कुराकानीको रेकर्ड आफूसँग भएको दाबी गरेको छ ।
उक्त दुर्घटनाका प्रत्यक्षदर्शी उजैर खानले एक ठूलो विस्फोटको आवाज सुनेर के भयो भनेर बाहिर दौडिएको बताए । उनले भने, ‘चारवटा घर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका थिए । त्यहाँ ठूलो आगलागी भएको थियो र धुँवा आएको थियो । उनीहरु मेरा छिमेकी हुन् । म तपाईंलाई बताउन सक्दिनँ कि यो कति खतरनाक घटना थियो ।’ घटनास्थल नजिकै बस्ने डा. कंवल नाजिमले ठूलो आवाज आएपछि उनी घर बाहिर गएको र मस्जिद पछाडि कालो धुँवा निस्किरहेको देखेको उनले बताइन् ।
डा. नाजिमले उनको घर दुर्घटना स्थलभन्दा निकै नजिक भएको र आफूले मानिसहरु चिच्याइरहेको सुनेको बताइन् । उक्त दुर्घटनामा जफर मसूद पनि बाँच्न सफल भएका छन् । मसूद बैंक अफ पंजाबका अध्यक्ष हुन् जसलाई गुलशन–ए–जौहर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।